Lammileen Tarkii kumaatamatti lakka’aman sirna dimookraasii deggaruun hiriira nagaa ba’an
Kiraa sassaabdonni faallaa faayidaa ummataa dhaabbatan Oromiyaa dirree jeequmsaa fi boo’ichaa taasis…
Yaadni moo’amaa fi boo’ichaa akka hin jiraanne artiistonni hojjechuu qabu –Dooktar Abiy
Atleetonni Oromoo sagalee dhagahaamuu addunyaa irratti qaban fayyadamun gocha Lammilee Oromoo irratt…
Rakkoon nageenyaa Buunoo badalleetti uumamee ture guutumaan guutuutti too’annoo jala ooleera: Doktar…
Rakkoon nageenyaa Buunoo Beddelleetti uumamee ture tasgabbaa’e jira
Rakkoo nageenyaa mudatu furuuf ga’een hawaasaa murteessadha –Obbo Isheetuu Dassee
Koonfaransiin dhaabbattummaa DhDUO sadarkaa godina, aanaa fi magaalota - Tuesday, 07 November 2017 05:35
Lammiilee deeggaruuf maallaqni baankii gale Birrii miiliyoona dhibba 3 - Tuesday, 07 November 2017 05:32
Itiyoophiyummaatii alatti daandii fi furmaata biraa hin-qabnu: Lammaa - Sunday, 05 November 2017 05:30
Waltajjiin obbolummaa Oromoo fi Amaaraa gaggeeffamaa jira - Saturday, 04 November 2017 09:44
Koonfaransiin dhaabbatumaa DhDUO 7ffaan xumurame - Thursday, 02 November 2017 09:43
Manni marichaa labsiiwwan raggaasistuu waliigaltee 10 raggaasise - Thursday, 02 November 2017 09:39
Finfinnee: Adoolessa 18, 2008 (FBC) Lammileen Tarkii kumaatamatti lakka’aman sirna dimookraasii deggaruunii fi yaalii mootummaa galagachuu tibba darbe taasifameen mormuun hiriira nagaa ba’an.
Hiriirri kana kan qindeesse paartii mormitootaa CHP haata’uyyuu malee Paartii Pireezdaantii Resip Taayyip Erdogaaniin deggarameera.
Deggartoonni paartii CHP baay’een addababayii Taksimitti walitti qabamuun alaabaa biyyattii fi suuraa Nama Tarkii ammaa hundeessee Musxafaa Kemal Ataturk mirmirsaa mormii fincilicha irratti qaban ibsaniiru.
Tarkiin gareewwan siyaasaan gargar yadan qabaattus Kantiibaan Istaanbulii fi qondaaltonni paartii AK kaan lammilee hiriira ba’an kanatti makamanii mul’ataniiru.
Dureen Paartii CHP Kemal Kilidaroglu haasaa hiriira kanaarratti dhageessisan haala kanaan dura hin amalateeffamneen chaanaalonni televizhinii mootummaa biyyattii deggaran dabarsaniiru.
Biyyattiitti erga yaalii kanaa hojjattoonni tajaajilaa, abbootiin seeraa, qondaaltonni mootummaa barsiisonni fi geggeessitoonni yuunivarsitii hojiirraa geggeeffamanii akka hidhaman ajajamuunsaa kan yaadatamudha.
Pireezdaant Erdoogaan kana malees shakkamtoonni mana-murtiitti osoo hin-dhihaatin mana hidhaa keessaa yeroo isaan turan guyyaa 30tti dheeressaniiru.
Midiyaan Tarkii qondaala mana sirreessaa biyyattii wabeefachuun akka gabaasanitti loltoonni 1,200 wayita fincilichaa hidhaman gadhiifamaniiru.
Haata’u malee loltoonni kunniin loltoota sadarkaa gadi aanaati. Janaraalotaa fi hoggantoota 100 dabalatee hojjattoonni tajaajilaa kumaatamatti lakkaa’aman ammaayyuu hidhaa keessa jiru.
Sanbat-duraa darbe, waardiyyaan pireezdaantii baay’ee iddoo qabu ture miseensonni isaa 300 ga’an fincilicha waliin wal-qabatee waan hidhamaniif adda bittinaa’eera.
More in this category: « Lammiilen Sudaan Kibbaa kuma 26 ol torbee 2tti biyya isaanii gadhiisanii ba’aniiru Pireezdaantiin Firaans haaraan daawwannaa hojii isaanii jalqabaa Jimaataa Afriikaadhaa jalqabu »
TV OROMIYA NOV-14-2016 Views : 2554
TV OROMIYA NOV-12-2016 Views : 9
TV OROMIYA NOV-11-2016 Views : 19
Torbe Kana 39370
Ji'a Kana 117670
01/05/07 irraa eggalee 2899884